Monster Hunter Freedom Unite inodzokera kuApp Store | IPhone nhau
Pave nenguva yakati rebei, asi Monster Hunter Freedom Unite yadzoka paApp Store Uye yakagadziridzwa kuisa rutsigiro rwepamutemo rwechazvino vhezheni yeIOS, ndiko kuti, iOS 9. Uye chokwadi ndechekuti iyo iOS vhezheni yemutambo wePSP yakamira kushanda munaGunyana 2015, apo iOS 9 yakavhurwa zviri pamutemo nguva pfupi yapfuura kuratidzwa kweiyo iPhone 6s uye iPhone 6s Plus. Rinenge gore rapfuura umo vateveri vane iOS 9 vasina kukwanisa kutamba iri zita.
Mwedzi mishoma mushure meMonster Hunter Freedom Unite Ndicharega kushanda Uye zvichangotanga kuvhurwa kweMonster Hunter Ongorora, Capcom akagadziridza webhusaiti reJapan Monster Hunter Freedom Unite achitaura kuti mutambo uyu waizogadziriswa muchirimo 2016, asi vaifanira kuugadzirisazve muna Chivabvu vachiti vane matambudziko kwete ivo chengetedza kuti yaizosvika muna Chikumi. Chinhu chega chinhu chevateveri panguva iyoyo chaive chivimbiso, asi kwete musi wekudzoka kwemutambo kuApp Store.
Monster Hunter Freedom Unite ikozvino inoenderana neIOS 9
Zviri pachena kuti kumirira kwave kureba, asi zvakatopfuura uye Monster Hunter Freedom Unite haina kutevera mumakwara e Bioshock, 2K Mitambo mutambo wakamira kushanda mushure mekuburitswa kweiyo iOS vhezheni uye isina kuzombodzokera kuApp Store.
Mutambo unoshanda zvakakwana uye tinovimba zvakafanana hazvizoitika zvakare nekutanga kwe iOS 10. Kana zvirizvo, Capcom angadai akagadzirisa zita iri kuti vateveri vatambe kwemwedzi miviri chete. Chero zvazvingaitika, Capcom anogona kunge akadzidza chidzidzo uye ave kutoyedza iyi nemimwe mitambo neyekutanga beta yeIOS 10 (Yechipiri iripi?!).
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Monster Hunter Freedom Unite inodzokera kuApp Store uye tora mukana wekugadzirisa
Apple inosunungura yechipiri beta yeIOS 10 yevagadziri